theme font (mtz) ပုလုပျပီး ကိုယျကွိုကျတဲ့ဖောငျ့ကို/ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဖောင့်ကို theme font ထားပီး သုံးမယ်... « XMS-MMF
theme font (mtz) ပုလုပျပီး ကိုယျကွိုကျတဲ့ဖောငျ့ကို/ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဖောင့်ကို theme font ထားပီး သုံးမယ်...
download link>>>>>> https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZriTVZ5m6HWh6LeryjGnjLoTtcEJ2Xs6pX
ဒီကောငျလေးက miui forum ထဲမှာ တငျပေးထားတဲ့ theme font(.mtz) လုပျပေးတဲ့ ဟာလေးပါ.. သူ့ကိုသုံးလိုကျရငျ ဘာထူးလာမလဲ..china rom, dev rom အတျောမြားမြားနဲ့ အတျောမြားမြားဖုနျးတှမှော အဆငျပွပေါတယျ.global rom တှဆေိုရငျတော့ xposed နဲ့ theme modules တှလေိုအပျပါမယျ. ထူးဆနျးစှာနဲ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ mi4i မှာတော့ ဘယျ rom ပဲသုံးသုံး ရနပေါတယျ..လုပျပုံလုပျနညျးကတော့ သူ့ကို အငျစတောလုပျပါ ပီးရငျ အဲဒီ့ထဲကို ဝငျလိုကျရငျ..titleauthordesignerversionUi versionPick font create MTZဆိုတဲ့ စာသားတှေ မွငျရပါမယျ......ဘယျလိုသုံးမလဲ..အဆငျပွသေလို ကွိုကျနှဈသကျရာထညျ့လို့ရပါတယျ..ဥပမာအနနေဲ့ဆိုရငျတော့..title mi mm fontauthor t.h.agdesigner t.h.agversion 1.0Ui version4Pick font ကိုယျသှငျးခငျြတဲ့ ဖောငျ့(ttf) ကို ရှေးပေးရပါမယျ.. ကိုယျဒေါငျးထားတဲ့ မွနျမာဖောငျ့တခုခုကို ထညျ့ပေးပါ... create MTZ ဒီဗားတနျးလေးကို နှိပျလိုကျရငျ mtz file ဖွဈသှားပီပေါ့..ဘယျထဲကိုရောကျသှားတာလဲဆိုတာကို သိဖို့တော့ လိုပါတယျfile explorer>miui>font>font2mtz ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲကို ရောကျသှားပါပီဒီထဲက ဖိုငျကို copy လုပျပီး တခွားနရောတခုမှာ paste လုပျပါ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိကွတဲ့အတိုငျး mtz တှကေ theme ထဲကိုထညျ့လိုကျတာနဲ့ ပြောကျသှားလို့ ပွနျရှာမရတော့လိုပါ.အိုကပေီးသှားရငျ theme>local(offiline)>import from sd card ကနေ ခုနက လုပျထားတဲ့ ဖိုငျလေးကို သှငျးလိုကျပီးရငျ font ကနေ apply လုပျပေးလိုကျရငျ သငျ့ဖုနျးလေးမှာ သငျလုပျထားတဲ့ theme ဖိုငျလေးနဲ့ လနျးနပေါပီ........ :p(mi account)တော့ theme font သုံးဖို့လိုပါတယျ..နညျးဟောငျးဆိုပမေယျ့လို့ အရငျက တငျပေးဖူးတာက သခြော ဒီလိုမြိုး ရှငျးမပွထားတော့ အဆငျမပွသေေးတဲ့လူတှနေဲ့ အခုမှ mi ဖုနျးကို စသုံးပီး ကလိခငျြသူမြားအတှကျ သိထားသမြှလေးကို လကျဆငျ့ကမျးပေးလိုကျပါတယျ....mi designer account ရှိသူမြားကတော့ ကိုယျလုပျထားတဲ့ဖောငျ့ကို miui market ပျေါတငျနိုငျခဲ့ရငျတော့ ကနျြတဲ့လူတှပေါ roboto zawgyi ကို သုံးလို့ရသလိုမြိုး အဆငျပွနေိုငျပါလိမျ့မယျ
ဒီကောင်လေးက miui forum ထဲမှာ တင်ပေးထားတဲ့ theme font(.mtz) လုပ်ပေးတဲ့ ဟာလေးပါ.. သူ့ကိုသုံးလိုက်ရင် ဘာထူးလာမလဲ..
china rom, dev rom အတော်များများနဲ့ အတော်များများဖုန်းတွေမှာ အဆင်ပြေပါတယ်.
global rom တွေဆိုရင်တော့ xposed နဲ့ theme modules တွေလိုအပ်ပါမယ်. ထူးဆန်းစွာနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ mi4i မှာတော့ ဘယ် rom ပဲသုံးသုံး ရနေပါတယ်..
လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ သူ့ကို အင်စတောလုပ်ပါ ပီးရင် အဲဒီ့ထဲကို ၀င်လိုက်ရင်..
ဆိုတဲ့ စာသားတွေ မြင်ရပါမယ်......
title mi mm font
Ui version 4
Pick font ကိုယ်သွင်းချင်တဲ့ ဖောင့်(ttf) ကို ရွေးပေးရပါမယ်.. ကိုယ်ဒေါင်းထားတဲ့ မြန်မာဖောင့်တခုခုကို ထည့်ပေးပါ...
create MTZ ဒီဗားတန်းလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် mtz file ဖြစ်သွားပီပေါ့..
ဘယ်ထဲကိုရောက်သွားတာလဲဆိုတာကို သိဖို့တော့ လိုပါတယ်
file explorer>miui>font>font2mtz ဆိုတဲ့ ဖိုဒါထဲကို ရောက်သွားပါပီ
ဒီထဲက ဖိုင်ကို copy လုပ်ပီး တခြားနေရာတခုမှာ paste လုပ်ပါ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိကြတဲ့အတိုင်း mtz တွေက theme ထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ ပျောက်သွားလို့ ပြန်ရှာမရတော့လိုပါ.
ပီးသွားရင် theme>local(offiline)>import from sd card ကနေ ခုနက လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို သွင်းလိုက်ပီးရင် font ကနေ apply လုပ်ပေးလိုက်ရင် သင့်ဖုန်းလေးမှာ သင်လုပ်ထားတဲ့ theme ဖိုင်လေးနဲ့ လန်းနေပါပီ........ :p
(mi account)တော့ theme font သုံးဖို့လိုပါတယ်..
နည်းဟောင်းဆိုပေမယ့်လို့ အရင်က တင်ပေးဖူးတာက သေချာ ဒီလိုမျိုး ရှင်းမပြထားတော့ အဆင်မပြေသေးတဲ့လူတွေနဲ့ အခုမှ mi ဖုန်းကို စသုံးပီး ကလိချင်သူများအတွက် သိထားသမျှလေးကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်....
mi designer account ရှိသူများကတော့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ဖောင့်ကို miui market ပေါ်တင်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ ကျန်တဲ့လူတွေပါ roboto zawgyi ကို သုံးလို့ရသလိုမျိုး အဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်
Credit to Ko Tin Htat Ag